ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး လူစာရငျး အဆငျ့ရပျတညျမှုရဲ့ (၁၃) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ အာဆငျနယျ - Arsenal Myanmar News
Transfermarkt ရဲ့ ‌‌ဖျောပွခကျြအရ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး လူစာရငျး အဆငျ့သတျမှတျခကျြရဲ့ အဆငျ့ (၁၃) နရောမှာ ရပျတညျနခေဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ ဂနျးနားတို့ရဲ့ ကစားသမားစုစုပေါငျးတနျဖိုးဟာ ပေါငျ (၅၆၈.၇၆) သနျး ဖွဈပွီး လီဗာပူးလျ (၉၇၃.၃၅ သနျး) ၊ မနျစီးတီး (၉၇၁.၆၄ သနျး) ၊ ခယျြလျဆီး (၇၅၅.၀၁ သနျး) ၊ မနျယူ (၇၁၉.၈၇ သနျး) နဲ့ စပါး (၆၄၄.၇၀ သနျး) တို့ရဲ့ နောကျမှာ ရပျတညျနတော ဖွဈပါတယျ။
နညျးပွအာတတောလကျထကျမှာ သောမတျဈပါတေး၊ ဂါဘရီယဲလျမာဂါလှိုငျဈ၊ ရူနာအဲလကျဈ ရူနာဆငျ၊ ဒါနီဆီဘယျယော့ဈ (အငှား) နဲ့ ဝီလီယံတို့လို ကစားသမားတှကေို ချေါယူခဲ့ပွီးနောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ (၄) အတှငျး ဝငျရောကျနိုငျဖို့ ပဈမှတျထားနပေါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ လအနညျးငယျတုနျးကတော့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ လူစာရငျးတနျဖိုးဟာ ပေါငျ (၆၅၆.၀၈) သနျး ရှိခဲ့တယျလို့ သိရပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ပေါငျ (၆၇.၃၂) သနျးလောကျ ကဆြငျးသှားခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး Football London က ဖျောပွထားပါတယျ။
ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈကပျဆိုးကာလဖွဈတဲ့အပွငျ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနအေရ ကစားသမားအခြို့ကို ရောငျးထုတျသှားဖှယျရှိနတောကလညျး အခုလို တနျးဖိုးကဆြငျးသှားခွငျးရဲ့ အကွောငျးအရငျးတရပျ ဖွဈနပေါတယျ။
တိုကျစဈမှူး အူဘာမီယနျနဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား သောမတျဈပါတေးတို့ကတော့ ဈေးကှကျပေါကျကွေး ပေါငျ (၄၅) သနျးနဲ့ အာဆငျနယျရဲ့ တနျဖိုးအမွငျ့မားဆုံး ကစားသမားတှအေဖွဈ ရပျတညျနပွေီး သူတို့နောကျမှာတော့ လာကာဇကျက ပေါငျ (၃၇.၈) သနျးနဲ့ တတိယနရောမှာ ရှိနပေါတယျ။
ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးရှငျဖွဈတဲ့ နီကိုးလကျဈပပေရေဲ့ လကျရှိဈေးကှကျပေါကျကွေးကတော့ ပေါငျ (၃၆) သနျးသာ ရှိတော့တယျလို့ သိရပွီး လူငယျကွယျပှငျ့လေး ဘူကာရိုဆာကာနဲ့ တနျကွေးအတူတူပဲ ဖွဈနပေါတယျ။ တခြိနျက ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေးချေါထားတဲ့ ကစားသမားတဦးဖွဈတဲ့ အိုဇေးလျကတော့ ဈေးကှကျပေါကျကွေး ပေါငျ (၉) သနျးသာ ရှိတော့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး လူစာရငျးပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အသငျး (၁၅) သငျး – 1. Liverpool (£973.35m) 2. Man City (£971.64m) 3. Bayern Munich (£793.08m) 4. Barcelona (£790.20m) 5. Paris Saint-Germain (£772.88m) 6. Real Madrid (£769.50m) 7. Chelsea (£755.01m) 8. Man United (£719.87m) 9. Atletico Madrid (£677.93m) 10. Tottenham (£664.70m) 11. Juventus (£636.93m) 12. Inter Milan (£589.95) 13. Arsenal (£568.76m) 14. Napoli (£543.13m) 15. Borussia Dortmund (£528.53m)
Ref : Football London , Transfermarkt
Transfermarkt ရဲ့ ‌‌ဖော်ပြချက်အရ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး လူစာရင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရဲ့ အဆင့် (၁၃) နေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဂန်းနားတို့ရဲ့ ကစားသမားစုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာ ပေါင် (၅၆၈.၇၆) သန်း ဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ် (၉၇၃.၃၅ သန်း) ၊ မန်စီးတီး (၉၇၁.၆၄ သန်း) ၊ ချယ်လ်ဆီး (၇၅၅.၀၁ သန်း) ၊ မန်ယူ (၇၁၉.၈၇ သန်း) နဲ့ စပါး (၆၄၄.၇၀ သန်း) တို့ရဲ့ နောက်မှာ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပြအာတေတာလက်ထက်မှာ သောမတ်စ်ပါတေး၊ ဂါဘရီယဲလ်မာဂါလွိုင်စ်၊ ရူနာအဲလက်စ် ရူနာဆင်၊ ဒါနီဆီဘယ်ယော့စ် (အငှား) နဲ့ ဝီလီယံတို့လို ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် (၄) အတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်တုန်းကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းတန်ဖိုးဟာ ပေါင် (၆၅၆.၀၈) သန်း ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပေါင် (၆၇.၃၂) သန်းလောက် ကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Football London က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဆိုးကာလဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအရ ကစားသမားအချို့ကို ရောင်းထုတ်သွားဖွယ်ရှိနေတာကလည်း အခုလို တန်းဖိုးကျဆင်းသွားခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းတရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်နဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား သောမတ်စ်ပါတေးတို့ကတော့ ဈေးကွက်ပေါက်ကြေး ပေါင် (၄၅) သန်းနဲ့ အာဆင်နယ်ရဲ့ တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံး ကစားသမားတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး သူတို့နောက်မှာတော့ လာကာဇက်က ပေါင် (၃၇.၈) သန်းနဲ့ တတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင်ဖြစ်တဲ့ နီကိုးလက်စ်ပေပေရဲ့ လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ကြေးကတော့ ပေါင် (၃၆) သန်းသာ ရှိတော့တယ်လို့ သိရပြီး လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေး ဘူကာရိုဆာကာနဲ့ တန်ကြေးအတူတူပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ တချိန်က ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေးခေါ်ထားတဲ့ ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ အိုဇေးလ်ကတော့ ဈေးကွက်ပေါက်ကြေး ပေါင် (၉) သန်းသာ ရှိတော့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး လူစာရင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသင်း (၁၅) သင်း – 1. Liverpool (£973.35m) 2. Man City (£971.64m) 3. Bayern Munich (£793.08m) 4. Barcelona (£790.20m) 5. Paris Saint-Germain (£772.88m) 6. Real Madrid (£769.50m) 7. Chelsea (£755.01m) 8. Man United (£719.87m) 9. Atletico Madrid (£677.93m) 10. Tottenham (£664.70m) 11. Juventus (£636.93m) 12. Inter Milan (£589.95) 13. Arsenal (£568.76m) 14. Napoli (£543.13m) 15. Borussia Dortmund (£528.53m)
By AM Editor| 2020-11-14T15:04:30+00:00	November 14th, 2020|Team News|Comments Off on ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး လူစာရငျး အဆငျ့ရပျတညျမှုရဲ့ (၁၃) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ အာဆငျနယျ